Mogadishu Journal » Khilaaf u dhaxeeya madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo Taliyaha Booliska
Khilaaf u dhaxeeya madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo Taliyaha Booliska
Mjournal :-Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shaqadiisa u fasaxay taliyaha qeybta Booliiska gobolka Nugaal G/sare Cabdixamiid Maxamed Dirir saacado kadib markii uu shaqada ka joojiyay taliyaha ciidamada Booliiska Puntland S/Gaas Muxiyadiin Axmed Muuse.
Gen Muxiyadiin ayaa shaqa-joojinta u cuskaday amar qaadasho la’aan uu sheegay in uu sameeyay G/sare Cabdixamiid Dirir oo sidoo kale ah taliyaha ciidanka PSF ee gobolka Nugaal.
Taliyaha qeybta Booliiska gobolka Nugaal G/sare Cabdixamiid Maxamed Dirir
Balse madaxweyne ku xigeenka ayaa buriyay shaqa-joojinta waxaana taliyaha Booliiska lagu amray in uu mudda 24 saac gudaheeda ku soo galo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Labadda Masuul ayaa waxaa soo kala dhexgalay Khilaaf ka dhashay xilka qaadista iyo tilaabooyin uu qaaday taliyaha Ciidanka Booliska oo uusan kala tashan Madaxweyne ku xigeenka oo hadda kusime ka ah Puntland.
Faahfaahin Sarkaal ka tirsan qeybta baarista dambiyada oo Muqdisho lagu dilay
100 Askari oo tababar loo furay